विषम परिस्थितिमा व्यवसायीहरु नाफा भन्दा पनि सेवाको हिसावले लागी परेका छन – Info Bazar
April 18, 2020by Info Baazaar0 comments
लकडाउनले जन जिबन प्रभावित भएको पनि आज २६औ दिन पुगेर २७ दिन तर्फ पुग्दै छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर परेको छ । अहिलेको अवस्थामा अवस्था के छ ? कोरोनको कत्तिको असर परेको छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पोखरा चेम्बर अफ कमर्श कास्कीका अध्यक्ष किसान सुनार सँग कुराकानी गरेका छौं–
लकडाउनको समयमा पोखरा चेम्बर अफ कमर्श कास्कीले कस्तो भुमिका खेलेको छ ?
लकडाउन सुरु हुनु अघावै चेम्बरले सतर्कता अपनाएर आपुर्ती व्यवस्थापनलाई कसरी सहज गराउने भनेर जिल्ला प्रशाशन प्रमुख सङ्ग बसेर छलफल गरी पहिलै तयारी गरेका थियौ। चेम्बरकै अगुवाइमा होटल व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि भयो । चेम्बरकै पहलमा सुरक्षा निकाय स्वास्थ्यकर्मीको लागी हामीले पाचँ हजार थान मास्क पनि उपलब्ध गराएका छौ । पोखरा महानगरपालिकाले चेम्बरलाई ६ वटा वडाहरुमा खाधान्न साम्रगीहरुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिइेको थियो हामीले यसलाई सहज गरौ र राहत बितरणमा समेत स्वयमसेवकको भुमिका पनि निर्वाह गर्यौ।
लकडाउनको समयमा आइपर्ने समस्या गुनासाहरुको समाधनको निम्ती चेम्बरले हेल्प् डेस्क र टोल फ्री नम्वर पनि सन्चालनमा ल्याएका छौ । आमनागरिकको सेवाको लागी पुरै चेम्बर परिवार दिडि रहेका छौ। यसैले हामी आफै पहिला सुरक्षित हुदैँ सामाजिक सेवामा लागिरहेका छौ ।
लकडाउन अबधी भर खाद्यान आपुर्ती कस्तो छ ?
लकडाउन सरकारले घोषणा गर्दै छ, भन्ने जानकारी आउना साथ चेम्बरले यो प्रदेशमा ६ महिनालाई पुग्ने खाधान्नहरु अति आवश्यक समाग्रीहरु छ भनेर हामीले अनुमान राख्यौ । लकडाउन सुरु भएको दुई हप्ता पछीको हाम्रो दोस्रो सर्वेक्षणमा हामी यो निक्यौलमा पुग्यौकी अब हामी सङ्ग २ महिना मात्र पुग्ने सामनहरु स्टग छ भन्ने ठम्यायौ।
धेरै ग्राहकहरुले पहिलै स्टगको लागी पनि लगिसके । केही समय हामीलाई ग्यास आपुर्तीमा पनि समस्या देखियो । मानिसहरुले अनावश्यक रुपमा हतोषशाही भएर ग्यासहरु स्टग लगेर राख्दा आपुर्तीमा समस्या देखियो । पहिलो चरणमा सहजताका लागी ७ केजीको ग्यास बजारमा ल्यायौ पछी सहज हुदै गए पछी भरिएको सिलिण्डर पनि बजारमा आयो ।
हामीलाई धेरै दिन यो समस्या सङ्ग पनि जुध्नु परेन अहिले सहज रुपमा ग्यास बितरण भैरहेको छ त्यो पनि भरिएको सिलिण्डरमा । खाने तेल र दाल पनि हामीलाई अहिले सहज रुपमा आपुर्ती भइरहेको छ। सरकार पनि अति आवश्यक खादान्नहरु आपुर्तीमा सहज ढङले व्यवसायीहरु सङ्ग समन्य गरेको छ।
कोरोना कोभिड १९ को महामारीले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर परेको छ ?
कोरोना माहामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असर पारेको छ। यदपी विश्व बैकले विश्वमा आर्थिक मन्दी नै देखिने चेतावनी दिइसकेको छ । विश्व शक्ति राष्ट्रहरुमा परेको असरले नेपाल पनि त अछुत रहन सक्दैन । सघिय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले राखेको आर्थिक बृदिदरको जुन उदेश्य छ यसले हामीलाई ३ बर्ष पछाडी धकेल्ने कुरा मेरो अनुमान हो र यो निश्चित नै छ। कोरोनाको असर जहाँतही छ। महामारीले आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरले उधोगिहरु धरासायी नै छ ।
अहिले बेरोजगार बढेको छ ,औधोगिक कलकारखान सबै ठप्प छन ,उत्पादन शुन्य छन, यसले आर्थतन्त्रलाई धेरै नोक्सानी गराएको पनि छ । अहिले जस्तो परिस्थिति हामीले ७२ सालको महाभुकम्पमा पनि भोगेनौ ।
अहिले निकै कठिन छ। अहिलेको माहामारीले विशेषत कृषि क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्रमा परेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा व्यवसायीहरुले नाफा भन्दा पनि सेवाको हिसावले ,सामाजिक उतरदायित्वको हिसावले सहज रुपले आमनागरिक माझ अति आवश्यक खाधान्न सामग्रीहरु के कसरी सहज रुपमा पुर्याउन सकिन्छ भनेर लागी परेका छन।
राज्य पक्षबाट केही अपेक्षा ?
अन्य मुलुक राष्ट्रहरुले राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने तयारीमा छ । नेपाल सरकारले पनि उधोगि व्यबसायीहरु सङ्ग छलफल गरी राहत प्याकेज अघि सार्नु पर्छ । नत्र हामी ३ वर्ष पछाडी धल्केलिन्छौ जुन बेला सघिय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ र ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्दिदर बढाउने उदेश्य लिएका थिए हामी तेही अवस्थामा नै पुग्छौ । सरकारले जुन उदेश्य किएर भर्खरै मात्र अर्थतन्त्रले गतिशिलता लिएको थियो । आर्थिक समृध्दिले बाटो पहिल्याउदै गरेको थियो । आर्थिक सुचक पनि बढ्दै गैरहेको थियो।
व्यवसायीहरुले व्यवसाय ऋण लिएर नै व्यवसाय चलाएका हुन्छन। राज्यले राहतको रुपमा व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकतामा रुपमा व्याजदरमा हेरिदिनु पर्छ । दोस्रो कुरा लकडाउन खुले पछी साना तिना व्यवसायीहरु देखी ठुला व्यवसायीहरुलाई पहिलेकै चरणमा आउन ६ महिना देखी १ वर्ष सम्मको समय लाग्न पनि सक्छ । अव बैकहरुले यो कुरालाई मध्य नजर गरेर थोरै प्रतिशत व्याजदरमा ऋण
उपलब्ध गराइदिनु पर्छ। यो बेला बैकले सेवा गर्ने हो नाफा कमाउने बेला होइन ।
This Page Total Views: 1,126
March 26, 2020by Info Baazaar